Heathrow anobatana neMicrosoft kurwisa kutengeswa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Heathrow anobatana neMicrosoft kurwisa kutengeswa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Heathrow anobatana neMicrosoft kurwisa kutengeswa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo.
Kutengeserana kwemhuka dzesango kusiri pamutemo ndechimwe chemhosva shanu dzinopa mari yakawanda pasi rose uye kunowanzoitwa nemakoronyera akarongeka anoshandisa zvifambiso zvedu nehurongwa hwemari kutamisa mhuka dziri kunze kwemutemo uye purofiti yadzo pasi rose.
Heathrow inobatana neMicrosoft, UK Border Force CITES uye Smiths Detection kuti vatumire hurongwa hwekutanga hwehungwaru hwepasirese hunoona uye hunovavarira kumisa kutengeswa kwemhuka dzesango kuburikidza nenhandare dzendege.
Project SEEKER yakaratidzwa kuna HRH The Duke weCambridge pachiitiko chiri kumuzinda weMicrosoft kuUK nhasi.
Kutevera miedzo yekupayona kuHeathrow, Microsoft inodaidzira nzvimbo dzekufambisa dzepasirese kuti dzishandise sisitimu iyi kubatsira kurwisa indasitiri yekutengesa mhuka dzesango zvisiri pamutemo $23bn.
Heathrow yakabatana navo Microsoft kuyedza hurongwa hwekutanga pasi rose hungwaru hwekurwisa kutengeswa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo. 'Projekiti SEEKER' inoona kutengeswa kwemhuka mumitoro uye mikwende inopfuura nepanhandare yendege nekutarisa kusvika kumabhegi mazana maviri nemakumi mashanu pazuva. Yakarekodha 250,000%+ yakabudirira yekuona uye yainyanya kushanda pakuziva zvinhu zvenzou zvakaita senyanga nenyanga. Nekuona zvimwe zvinhu zvakatengeswa uye kare, zviremera zvine nguva yakawanda, chiyero uye ruzivo rwekutsvaga vatengesi vematsotsi uye kurwisa indasitiri isiri pamutemo yemadhora mazana maviri nematatu ekutengesa mhuka dzesango.
Pamusoro pe Microsoft, Project SEEKER yakagadziridzwa mukubatana neUK Border Force uye Smiths Detection uye inotsigirwa neRoyal Foundation. Vagadziri veMicrosoft vakadzidzisa Project SEEKER kuona mhuka kana zvigadzirwa zvisiri pamutemo zvigadzirwa zvinoshandiswa mumishonga, uye miedzo kuHeathrow yakaratidza algorithm inogona kudzidziswa pane chero mhando mumwedzi miviri chete. Iyo tekinoroji inozivisa otomatiki chengetedzo uye maBorder Force maofficial kana yaona chinhu chisiri pamutemo chemhuka mumutoro kana mukwende scanner, uye zvinhu zvakabatwa zvinogona kuzoshandiswa seumboo mukumhan'arira mbavha.
Mutungamiriri weCambridge akashanyira Microsoft's headquarters kuti anzwe nezvekugona kwehunyanzvi uhu sechikamu chebasa rake neRoyal Foundation's United for Wildlife chirongwa. Kutsigira kuvandudzwa kweiyi tekinoroji nyowani, timu yeProjekti SEEKER yakakwanisa kubatsirwa neUnited for Wildlife network yepasi rose yehunyanzvi pakutengeserana kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo. Pamusoro pezvo, United for Wildlife ichave ichishanda pamwe nemasangano emubatanidzwa mubazi rezvekutakurwa kutsigira kuburitswa kwepasi rose kweSEEKER kugona.
Jonathan Coen, Mutungamiriri weSecurity pa Heathrow Airport, yakati: “Project SEEKER nekudyidzana kwedu neMicrosoft and Smiths Detection kuchatichengeta pamberi pevatengesi, nekuongorora tekinoroji nyowani ichatibatsira kuchengetedza mhuka dzesango dzinokosha kwazvo pasi rose. Iye zvino tave kuda kuona nzvimbo dzakawanda dzekufambisa dzichishandisa nzira itsva iyi, kana tichida kutora matanho ane musoro pasi rose kurwisa indasitiri iyi isiri pamutemo.”
United for Wildlife ine chinangwa chekuita kuti zvitadze kuti vatengesi vatakure, vawane mari kana purofiti kubva kune zvigadzirwa zvemhuka zvesango zvisiri pamutemo nekuvaka hukama hwakakosha pakati pezvikamu zvekutakura nezvemari, masangano asiri ehurumende nevanochengetedza mutemo uye nekukurudzira kugovana ruzivo uye maitiro akanaka pakati peizvi. wadau. United for Wildlife yanga ichishanda nemasangano akaita seMicrosoft kusimudzira ruzivo rwetekinoroji inogona kutsigira kuedza kukanganisa kutengeswa kwematsotsi kwezvigadzirwa zvemhuka dzesango pasi rose.